Kukholwe noma ungakukholwa, akuwona owokumaketha ngaso sonke isikhathi, ama-Blogs, ama-Viral Messaging, njll. Kwesinye isikhathi kumane nje kuyinsizakalo enkulu yamakhasimende. Nginewashi leFossil eliseduze futhi engilithandayo ngoba izingane zami zingithengele usuku olulodwa lokuzalwa. Ngiyethemba ukuthi ihlala kuze kube phakade. Ibhethri lihlala unyaka owodwa noma emibili. Ibhethri lami liphele ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kepha bengilokhu ngigqoke iwashi. Kuzwakala kuyisimungulu kodwa ngikwenze ngoba